Sidee Mashruuca Marmaray u saameynayaa gaadiidka badda? Tallaabooyin noocee ah ayaa la qaadayaa? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSidee Mashruuca Marmaray u saameynayaan gaadiidka badda? Waa maxay tallaabooyinka la qaadayo?
16 / 04 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Mashruuca Marmaray wuxuu si weyn saameyn ugu yeelan doonaa gaadiidka gudaha magaalada gudaheeda. Sababtoo ah aaggan waa gobol ay kuyaalaan Wadooyinka Magaalada iyo shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ee qaada 80% gadiidka badda. Eminönü, Haydarpaşa, KadıköyAagagga ku dhexyaal hexagon waxay u ekaayeen Beşiktaş, Üsküdar, Karaköy. Xaqiiqdi waa in Marmaray saameyn ku yeelan doonto tan. Waxaan sidoo kale ognahay in mashruucu uusan ahayn mashruuc ka hortagga badda. Waxaan u maleynaynaa inay kaliya saameyn weyn ku yeelan doonto awooda rakaabkeena. Sidaas darteed, awoodda qaadista rakaabku waxay ka badan tahay saddex jeer safarka badda. IMM waxay leedahay qaab isku dhaf ah iskuxirka gaadiidka dadweynaha iyadoo lala kaashanayo Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta. İBB, oo ka shaqeyneysa inay siiso adeegyo wanaagsan shirkado badan oo kala duwan, ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u adkeyn lahayd shabakaddeeda adeegga oo leh qaabab kala duwan. Waxaan ka mid nahay hababkaas. Gaadiidka badda waa lama huraan in Istanbul, oo ay ku hareereysan yihiin biyo dhinacyada oo dhan. In kasta oo ay jiraan mashruucyo kale, gaadiid badeeddu waxay ku gooyn doonaan meelaha qaarkood, laakiin waxay la kulmi doonaan horumar dhinacyo kala duwan ah.
Dabcan, xarig sida Usküdar-Eminönü ayaa si aad ah u saameeya mashruuca Marmaray. Khadkayaga gaadiidka ugu sareeya. Duulimaadyadeena ayaa dib loo habaynayaa. Baaritaanno ayaan samaynaa. Hababka gaadiidka waxay leeyihiin saameyn, ka dib markay arkeen natiijooyinka waxqabadka, waxaan soo saari doonaa habab kale. Mashruuca Metrobus wuxuu helay naqdi badan maalmaha hore. Hadda, 1 waxay noqotey mashruuc ku dhow malaayiin rakaab ah. Waxa kale oo uu ku guulaystay inuu soo jiito rakaab ka mid ah gaadiidka badda. Waxaan rajeyneynaa in mashruuca Marmaray uu ka guuleysan doono intii la filayay iyadoo la raacayo gaadiidka kale ee mitrooga. Waxaan qaabeyneynaa taraafikadayada kiis-mar walba. Waxaan hore u aragnaa hoos udhaca 50%, waxaanan la wadaagnay dadaalladayada Wasaaradda ee waddooyinka kala duwan. Waxaan u baahannahay inaan mashaariic cusub keeno gaadiidka badda, waa in aan la wadaagno qaybaha gaarka loo leeyahay. Gaadiidka badaha waa ka baxsan yahay gaadiidka dhulka. Si loo tirtiro xaaladdan, waxaan u baahanahay inaan horumar samayno oo aan soo saarno mashaariic caadi ah. Dhanka macnaheedu waxa aanu u fureynay Usküdar-Beşiktaş sannadkii hore, oo aan u malaynayno in ay sii kordhin doonto tartiib tartiib. Jasiiradaha dabcan waa muhiim. Gaar ahaan khadadka ka baxsan khadka Marmaray waxay noqon doonaan kuwo soo jiidasho leh oo loogu talagalay gaadiidka badda ee magaalada.
Miyuu kaydiyaa maalgashiga maalgashiga ma saameeyaa mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Bursa?
Mashruuca Boqortooyada Ottoman waa in laga dhigaa Van sida Marmaray
88 Sanadkiiba hal Saldhigga Yaxshihan wuxuu ku jiraa ilaalin